ပဋိ ပက္ခများစွာကြောင့် သုံးစွဲသူများ နှေးကွေးလာကြောင်း မလွဲမသွေ ပြောကြားခြင်း၊ ဗီဒီယိုဖလက် ဖောင်းများပျက်ခြင်း၊ ဈေးကွက်အားမာန်များ ပြသခြင်း - Pandaily
Categories: Industry ကိုPandaily ဩဂုတျ 24, 2021 ဩဂုတျ 25, 2021 မှာ Posted
‘အမြားကွီးတိုကျဖကျြတယျ၊ ဒီဥက်ကာပြံနဲ့ တူတဲ့ အမွနျနှုနျးမွငျ့တကျလာမှုက ဈေးကှကျကိုစိနျချေါပွီး အီးကောမာ့ဈရဲ့ တနျဖိုးကွီးအသဈတှနေဲ့ ဆှဲငငျအားရဲ့ သကျရောကျမှုကို စတငျခံစားရနိုငျပါ တယျ။
သညျကွညောခကျြကို ဇှနျလအထိ သုံးလပတျအတှငျး စှမျးဆောငျရညျ အမြားကွီးရှိတဲ့ ကုမဏီက ထုတျပွနျခဲ့ပွီး နှဈစဉျအသကျဝငျဝယျယူသူ သနျး ၈၅၀ အထိရှိခဲ့တဲ့ သညျစာရငျးသဈဟာ ၂၀၁၉ ခုနှဈနောကျပိုငျး အနိမျ့ဆုံး သုံးစှဲသူအရအေတှကျကို သတျမှတျထားပါတယျ။
Alibaba ဟာ သုံးစှဲသူ 900MN ထကျ ပိုမိုစုပွုံနပွေီး အသုံးပွုသူ သနျး ၁၀ဝ ကို ပဈမှတျထား ခြီတကျနပေါတယျ။ Beijing Dong ဒုတိယသုံးလပတျမှာ သုံးစှဲသူ ၃၂ သနျးအထိ စံခြိနျတငျမွငျ့တကျခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အလီဘာဘာနဲ့ Beijing တို့ဟာ အပွငျမှာယှဉျပွိုငျမှုတှမြေားစှာပွုလုပျခဲ့ကွပွီး ရနျပှဲတှမြေားစှာပွုလုပျခဲ့ကွတာကိုတှရေ့သလို တုနျလှုပျခြောကျခြားမှုဒဏျကိုခံခဲ့ကွရပွီး အခွားဗီဒီယိုပလကျဖောငျးတှထေကျမှာ တိုတောငျးတဲ့ဖိအားတှေ ပိုမိုခတျေစားလာပါတယျ။ အလီဘာဘာနဲ့ ဘဂေငျြး မွို့ငယျတှကေို တိုးခြဲ့လိုကျတာကွောငျ့ စားသုံးသူတှေ အထိခိုကျမခံတဲ့ ဈေးနှုနျးနဲ့ အနိုငျယူနိုငျဖို့ ကောငျးမှနျတဲ့ သုံးလပတျရလဒျကို ထုတျပွနျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ချန်လဲ့က သုံးလတစ်ကြိမ် Performance Conferencing တွင် ပြောကြားရာတွင် “သုံးစွဲသူအုပ်စုကြီးများ၏ အမြင်တွင် ဗီဒီယိုအတို၊ အကြိမ်ရေနှင့် သုံးစွဲသူ အကြိမ်ရေမြင့်မားလာမှုကို အချိန်ဖြုန်းသည့် ဗီဒီယိုအတို၊ မီတာခများ မြင့်တက်လာမှုက အံ့သြစရာမဟုတ်၍ နည်းလမ်းများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြသည်ထက် ပိုကောင်းသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ “ ကျွန်တော်တို့ Platform ကို ခိုးဝင်တဲ့ ကုန်သည်တွေ ပိုများလာတာကို မြင်နေရပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ တိုးလာပြီး ဆက်ပြီး တိုးသွားမှာပါ၊ လှုပ်ရုံသက်သက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန် တုန်အောင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို ဗီဒီယိုအတိုလေး ရိုက်ရမှာပါ”
Chen ပြောခဲ့တဲ့ Sound (သို့) Fast Hand နဲ့ အခြားတိုတောင်းတဲ့ video player ဟာ သုံးစွဲသူတွေအတွက် “Shopping Experience” ကို ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စားသုံးသူရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ “Dower-dower-and Sustainability ” ဆိုတာကို အမွဲတစေ ဆနျးစဈခံနရေပွီး “သူ့ရဲ့ စီးပှားရေးပုံစံက ဆနျးသဈနဆေဲ ဖွဈပွီး စားသုံးသူ လိုအပျခကျြတှကေို အကောငျးဆုံး ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျတဲ့ မျောဒယျ” လို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
“ တရုတ်ဈေးကွက်က အရမ်းအားသန်ပါတယ်” ဟု ချန်းက ဆက်ပြောသည်။ “ ကျနော်တို့ လက်ရှိတိုးတက်မှုနှုန်းကို ရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာလား? သေချာတာကတော့ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဒီလိုမှိုင်းတိုက်မှုတွေ မရှိဘဲနဲ့ ကျနော်တို့ဟာ တခြားသူတွေထက် ကျော်လွန်ပြီးတော့ တားဆီးနိုင်မှာလား? ဒါတွေလည်း ကျနော်တို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဆက်လက်ပြီးတော့ တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမယ်၊ ကျနော်တို့ Platform ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးတော့ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ စွမ်းရည်ကို ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျောပေးသွားမှာပါ”
ဒါ့အပွငျ တရုတျဆနျ့ကငျြရေးလကျဝါးကွီးအုပျမှုကွီးကွပျရေးအဖှဲ့ရဲ့ အမြိုးသားဈေးကှကျကွီးကွပျကှပျကဲရေးအဖှဲ့က သညျလအတှငျး ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ စညျးမဉျြးမူကွမျးအရ ပွိုငျဘကျတှနေဲ့ ပွငျပဝကျဘျဆိုကျတှကေို သှားလာခှငျ့ပိတျပငျဖို့ တားမွဈထားပါတယျ။
သတငျးမြားအရ တရုတျနိုငျငံ၏ အကွီးဆုံး အငျတာနကျ ပလကျဖောငျးကုမ်ပဏီနှဈခုဖွဈသညျ့ Tencent နှငျ့ Alibaba တို့က အပွနျအလှနျ ဖှငျ့လှဈရနျ စဉျးစားနကွေောငျး သိရပါသညျ။ အစောပိုငျးက Tencent ရဲ့ ဆိုရှယျအပလီကေးရှငျးဖွဈတဲ့ WeChat ဟာ ပုံမှနျအားဖွငျ့ Alibaba ရဲ့ ပလကျဖောငျးပျေါကို လငျ့ချကူးခှငျ့မပေးပါဘူး။
Topics: မွငျကှငျးသုံးစွဲသူ ၈၂၄ သန်းအတွက် အများကြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ၊ အကြိ်မ်အစဉ်လိုက် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့
အစောပိုင်းတုန်းက အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့ ရန်ပွဲကြီးကနေ ခုလို သူ့ရဲ့အပေးအယူကို လူမှုကွန်ရက် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ WeChat က မျှဝေခဲ့ပြီး မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကြား မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် Tencent ကို ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။